Jowhar.com : Somali Leader News - News: Safiirka Imaaraadka Carabta Soomaaliya oo booqasho ku tegey Boosaaso(Sawiro)
April 24 2014 20:53:30
Safiirka Imaaraadka Carabta Soomaaliya oo booqasho ku tegey Boosaaso(Sawiro)
Wafdi uu horkacayo safiirka wadanka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya danjire Maxamed Cismaan ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Xubnaha wafdigan ayaa waxaa ku soo dhoweeyay garoonka dayuuradaha ee magaalada Boosaaso mas�uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland Cali Axmed Faatax. Wafdigan ayaa waxa ay la qorsheynayaa in ay kula kulmaan magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo labadii maalmood ee la soo dhaafay booqasho ku joogay magaalada ganacsiga ee Boosaaso. Wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka Puntland ayaa ku tilmaamay booqashada safiirka inay tahay mid lagu doonayo in lagu xoojiyo xiriirka ka dhexeeya maamulka Puntland iyo wadanka Imaaraadka Carabta islamarkaana ay u indho-indheyn lahaayeen mashaariicda ay dhaqaalaha ku baxa iyagu bixiyaan ee xilligan Puntland ka socda.
Waa markii ugu horeysay oo uu booqasho ku tago safiirka Imaaraadka Carabta uga wakiilka ah Soomaaliya danjire Maxamed Cismaan magaalada Boosaaso tan iyo markii uu madaxnimada Puntland loo doortay Cabdiweli Maxamed Cali. Sidoo kale waxaa magaalada Boosaaso gaaray wafuud ka socotay wadamo ka mid ah Midowga Yurub sida wadamada Ethiopia,Holland,Denmark iyo wadamo kale. Kulankan ayaa sidoo kale waxaa ka qeybgalay safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya iyadoo kulankana uu ka dhacay markab ku xirnaa xeebta magaalada Boosaaso.
Illaa hadda wax war ah oo rasmi ah oo ka soo baxay kulankan ma aysan shaacin wadamada Yurub balse afhayeen u hadlay xukuumada Puntland ayaa sheegay in shirka uu madaxweyne Gaas uu ku soo bandhigay qorshaha shanta sano ee soo socota ee xukuumadiisa ay qorsheynayso.
mahad on March 26 2014
0 Comments · 3509 Reads
Jowhar.com750,538 unique visits